ချီးကျူးခန်းလေးဖွင့်ပါရစေ ဟတ်ဟတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ချီးကျူးခန်းလေးဖွင့်ပါရစေ ဟတ်ဟတ်	8
Posted by Mr. Pocket on Oct 12, 2015 in Arts & Humanities, Cultures | 8 comments
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ စိတ်ထားလေး ကောင်းမွန်တာကိုဗျာ.. ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်…
ဒီနေ့ အလုပ်ကိုလာတော့ ၄၅ အဲယားကွန်း လေး တွေ့တာနဲ့စီးလာလိုက်တယ်..
ကားပေါ်ရောက်တော့ နေရာမရ..အဲယားကွန်းနဲ့ဆိုတော့ လူပိုများတယ်မလား.. အဲ့တာနဲ့ရတဲ့နေရာလေးဝင်ရပ်ရတာပေါ့..
အဲ အဲ့ဒီမှာ ချီးကျူးချင်တာလေးတွေတွေ့ပါလေရော… ထိုင်ခုံမရတဲ့အမျိုးသမီးတွေ လက်ထဲလည်းအထုပ်တွေကလည်းများသကိုး..ထိုင်ခုံရတဲ့အမျိုးသားတွေက ကိုင်ပေးသကိုး တကယ်ရက်ရက်ရောရောကို ကိုင်ပေးတာ…(အမျိုးသမီးတွေကလည်းချောသကိုး ခ်ခ်) အလုပ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ လက်ထဲမှာကလည်း တစ်ဆွဲ တစ်လွယ်လောက်တော့ အသာလေးပါသကိုး၊ ပြောချင်တာကတော့ဒါလေးပါ.. မြန်မာလူမျိုးတွေ ကူညီတတ်ပုံများပြောပါတယ်…တကယ့်ကို အားရပါးရကူညီတာ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို(အမျိုးသမီး ချောချောလေးတွေသီးသန့်) အထုပ်တွေကူကိုင်ပေးတာတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ.. (အဘိုးကြီးတွေ့ခမျာတော့ ဂေါက်ထီးကြီးနဲ့ အလေးအပင်တွေနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ် ရရာနေရာမတ်တပ်ရပ်… မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဒီခရီးဝေးဝေးနီးနီး ရောက်မဲ့ အချိန်အထိ စီးပေတော့..)
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ တစ်ချို့ကိုပါ တကယ်ကူညီတတ်တဲ့ လူငယ်လေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်(ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့ တိန်)အဲ့လိုကူညီတဲ့လူတွေရှိသလို ဘဘ ကျေးဇူးနဲ့ ဘ၀သစ် စခွင့်ရတဲ့ လူငယ်တစ်စုကလည်း အထဲမှာတုန်းက လူတွေ အပြင်မှာ ပြန်ဆုံပြီး ဘ၀ဟောင်းကအလုပ်လေးတွေကို အစုအဖွဲ့နဲ့ပြန်လုပ်နေကြတာကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ တွေ့နေကြားနေရပြန်တယ်ဗျာ..
ကဲကဲ.. ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ ခလေးတို့ရေ… အခုတော့ တော်သေးဘီ…. ဘိုင့်…
မြစပဲရိုး says: ဘ၀ဟောင်းကအလုပ်လေးတွေ ဆိုတာ “ခါး” လား။
.ပေါ်တင် ဓားမြတိုက် နေတဲ့ ခေတ်မှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘဘကြီးက သူလိုရင် ခိုင်းလို့ ရအောင်တဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး says: .မြန်မှာဆိတ်ဓါတ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: စောစောစီးးစီးး အမျှဝေအူးးမှ..!!
သန်းးမကြီးးကောင်းးမှု အကျဉ်းးသား ၆၀၀၀ ကို ဒီနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးးမတဲ့…
ဒေါသထွက်နေသောလူအုပ်ကြီးးနှင့် လက်ပတ်နီ စွမ်းအားရှင်တို့ အင်အားးဖြည့်တင်းးမှု အတွက် သာဓု ခေါ်ဆိုကြကုန်..!!
Ma Ma says: ဘုရားတရားကို ပိုသတိရဖို့၊
ကုသိုလ်အာရုံပိုရဖို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။
သာ……….ဓု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 31
Mr. Pocket says: ဖျားရေ ဒါမျိုးတော့ သာဓုလုံးဝ မခေါ်နိုင်ပါဘူး အစ်မတော်.. ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ ဇီဝိန်ကို ချုပ်သွားတော်မူပါတော့လို့…
Alinsett @ Maung Thura says: အနော်လည်း ကောင်မလေးချောချောလေးတွေ ဆိုရင်
အမျိုးသားဆိုသူတွေကတော့ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးကြပေါ့
padonmar says: သူရို့က ကောင်မလေးတွေ အထုပ်ကိုင်ပေးရင် ကိုယ်က ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေ အထုပ်ကိုင်ပေးလိုက်ပေါ့။